[Holly house] Wabi-Jifeng First Line River View Balcony Bathtub Self-portrait Mirror Hongguang Bridge Head Liu'an Golden Mansion Kufuphi nesikhululo sikaloliwe, kufutshane neBugao Gubu Street, Wuxing Street
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe ongu朗读者
Umoya we-Wabi-sabi, yonke indlu i-micro-cemented, kwaye udonga kunye nomgangatho zidibeneyo. Ifenitshala yenziwe ngamaplanga ePaya amandulo avela eYunnan, enqabileyo, i-retro kwaye igqwesileyo kukwakheka. Ibalcony inebhafu eyakhelweyo kunye neefestile ezisuka kumgangatho ukuya kwisilingi. Ungalala ebhafini ukuze ubone umbono omangalisayo wobusuku boMlambo iLiujiang.
Le ndlu igubungela indawo ye-50 square metres kwaye ibanzi kakhulu. Indlu yonke isebenzisa i-micro-cement, eyaziwa kakhulu ngoku, ukwenza indawo ye-Wabi style idibaniswe nodonga kunye nomhlaba. Ifenitshala yenziwe ngezigodo zakudala zePaya, ezinesitayile esirhabaxa nesidala, esibhalwe kakhulu. Izindlu zangasese ezivulekileyo, izindlu zangasese zeshawa ezixhonywe eludongeni, kunye neebhafu zeJacuzzi ezakhelwe ngaphakathi kwibalcony ziyindlela ebalulekileyo yokonwabela imbonakalo yasebusuku kwaye uphumle. Umbala jikelele ulula kwaye unobuhle.
Kufuphi nentloko yebhulorho yaseHongguang, kukho indawo yokutyela yembiza eshushu ezantsi. Ukuhamba kulula kakhulu.
Umbuki zindwendwe ngu- 朗读者
Ndiyathemba ukudibana nabahlobo abaninzi kunye nokunxibelelana nabanye